တူရကီရဲ့အပြာရောင် Bayraklı ကမ်းခြေအရေအတွက်တိုးများလာ! ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအဆင့် ၃ RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာအထွေထွေတူရကီရဲ့အပြာရောင် Bayraklı ကမ်းခြေအရေအတွက်တိုးများလာ! ကမ္ဘာပေါ်မှာ 3
turkiyenin အပြာရောင်အလံကမ်းခြေ, နိုင်ရန်အတွက်ကမ္ဘာ၏အရေအတွက်တိုး
စပိန်နှင့်ဂရိတို့နောက်တွင်ယခုနှစ်တူရကီနိုင်ငံ၌ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအလံအပြာဆုံးသောအလံအမြင့်ဆုံးဆု ၃၈၆ ရှိသည့်နိုင်ငံမှာနံပါတ် ၄၈၆ ဖြစ်သည်။
ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ၏မြို့တော်ဖြစ်သည့်ကိုပင်ဟေဂင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းမှပေးသောအပြာရောင်အလံဆုအား ၂၀၂၀ အကဲဖြတ်မှုရလဒ်အနေဖြင့် ၄၈၃ ခုသို့ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ၄၈၆ ခုသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ အကယ်၍ တူရကီ ၂၂ Marina နှင့်ရွက်လှေ ၇ ကိုယခုနှစ်တွင် Blue Flag ချီးမြှင့်ခြင်းခံရသည်။
ဒီနှစ်အပြာရောင် Bayraklı အန္တာလီးတွင်ကမ်းခြေနံပါတ် ၂၀၆၊ မူဂလာတွင် ၁၀၅၊ Aydınတွင် ၃၅၊ mirzmir တွင် ၅၂, Balıkesirတွင် ၃၁၊ အစ္စတန်ဘူလ်တွင် ၂၊ ဆမ်ဆမ်တွင် ၁၃ ထ။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကိန်းဂဏန်းများကို akkanakkale, Kırklareli, Kocaeli, Düzce, Ordu, Mersin နှင့် Van တို့တွင်ထိန်းသိမ်းထားသည်။
ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ခရီးသွားလာရေး ၀ န်ကြီးဌာနသည် ၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင်အပြာရောင်အလံကိုအကောင်အထည်ဖော်သော FEE အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ ၅၀ တွင်ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံကိုပစ်မှတ်ထားသည်။
အပြာရောင်အလံအစီအစဉ်၏နောက်လိုက်များ ဦး ဆောင်သော ၀ န်ကြီးဌာနကို ၁၉၉၃ တွင်အမျိုးသားသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းအဖြစ်ထူထောင်ခဲ့သည် (TÜR establishedEV) http://www.mavibayrak.org.tr/ ၂၀၂၀ ဆုနှင့်ပတ်သက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအင်တာနက်လိပ်စာမှရယူနိုင်ပါသည်။
Kocaeli ၏အပြာ Bayraklı ကမ်းခြေသို့မရပ်မနားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစတင်သည်
Kocaeliler အပြာရောင် Bayraklı သူတို့ကကမ်းခြေကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းမရှိဘဲသွားလိမ့်မည်
ပြာသော Bayraklı ကမ်းခြေသို့အဆင်ပြေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး!
ဥရောပမှာရှိတဲ့နံပါတ်တစ်ခုမှာအတွက် Antalya လေဆိပ်ခရီးသည်တိုးတက်
တူရကီနိုင်ငံသည် YHT မြန်နှုန်းkaçıncıအဆင့်?
တူရကီအတွက်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး3စီမံကိန်းကို! ပထမဦးဆုံးအရာဌာန၌တတိယလေဆိပ်လည်းမရှိ
တူရကီ coronavirus ဖြစ်ရပ်မှန်အတွက်ကမ္ဘာ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သတ္တမအတွက်တန်ဖိုးများ
DHM: တူရကီအတွက်စက်တင်ဘာလအတွက်လေကြောင်းလိုင်းခရီးသည်များအရေအတွက်တိုးမြှင့်နှစ်ပတ်လည်ရာခိုင်နှုန်း 4.4
ရှကျရှံ့ခွငျးရိုးရီပတ်ဘလီကန်ခရိုင် Izmit သဲသောင်ပြင်လမ်းမကြီးအဖြစ် YHT မြို့ရိုးကို
ဓါတ်ရထားလိုင်းရထားလမ်းအတွက် Sekapark သဲသောင်ပြင်လမ်းမကြီးထား
အခြားရွေးချယ်စရာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အဓိကတူရကီနှင့်ရုရှားနိုင်ငံကြား BTK ရထားလမ်း
Bursa Stampeders ကမ်ပိန်း (ဗီဒီယို) အတွက်အလံရန်ကေဘယ်လ်ကားကနေအခမဲ့
ဝန်ကြီး Turhan: 'အားလုံးတူရကီ Bayraklı ဂြိုဟ်တုများမှတဆင့်သင်္ဘောများကိုကျွန်ုပ်တို့ကြည့်နိုင်သည်
Sekapark-သဲသောင်ပြင် Path ကိုပထမဦးစွာရထားလမ်းဟာ Tramway လိုင်းအတွက်ထားခြင်းဖြစ်သည်